Home Wararka Beesha Ayaanle Ceyr oo ka soo horjeestay qorshaha Kheyre, kana digay dagaal...
Beesha Ayaanle Ceyr oo ka soo horjeestay qorshaha Kheyre, kana digay dagaal beeleed
Wararka caawa ka imaanaya magaalada Guriceel ayaa sheegaya in Beesha Ayaanle Ceyr ay sheegeen in ay ka soo horjeesteen qorshaha Xasan Kheyre uu doonayo in uu ku kala qaybiyo beesha Ceyr.
Qaar ka mida Nabadoonnada beesha Reer Ayaanle Cayr ayaa ka soo horjeestay 20 Xildhibaaan ee Al sunna Wajameeca la siiyay iyagoo sheegay in wixii ay leeyihiin si toos ah loo siiyo beesha.
Dhanka kale Waxaa maanta lacag loo soo dhiibay Cali Wardhere Cali Yare iyo Agaasime Koofi taas oo la geeyay magalaada Guriceel si loo qanciyo beesha Ayaanle Ceyr in ay aqbaalaan qorshaha Dowlada. Lama iga cida lacagta soo dhiibtay ilaa iyo hadda.
Lama oga waxa ay ku dhamaan doonto arintaan laakiin waxaa la filayaa in beesha ay shir ku yeeshaan magalaada Dhuusamareeb maalinta berito ah.
Xasan Kheyre ayaa waxa ka daba timid beentii uu mudada sideeda bilood ah ku kala iibinayaay shacabka iyo dowlada Galmudug. Waxaan shaki ku jirin in ay adkaan doonto in uu Galmudug dib u dhiso shaqsigii ka danbeyeeyay burburkeeda.